दमकमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम - Purba Nepal
सरकारले बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारीको अन्त्यको लक्ष्य सहित सो लक्ष्य प्राप्तीका लागि स्वदेशमै पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्याएको छ ।
आगामी ५ वर्ष भित्रमा सरकारले बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारलाई निरुत्साहीत गरि स्वदेशमै काम गर्ने उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्ने गरी सरकारले सो कार्याक्रम ल्याएको हो ।
सरकारले देशमा आन्तरिक रोजगारीको क्षेत्र र दायरालाई विकास गरी श्रमको सम्मान गर्ने वातावरणको सिर्जना गर्ने तयारी गरेको छ ।
यस कार्यक्रममार्फत मुलुक भित्र नै उत्पादनशील रोजगारीका अबसरहरु सिर्जना गरी न्यूनतम रोजगारीको सुनिश्चितताको प्रत्याभूति गरिने सरकारले जनाएको छ । रोजगारी दिन नसकेको अवस्थामा त्यस्तो परिवारलाई सरकारले बेरोजगारी भत्ता समेत दिने सरकारको तयारी छ ।
‘सबैका लागि रोजगारः संवैधानिक अधिकार’ नारा भएको यो कार्यक्रम श्रमिकलक्षित छ। नयाँ कार्यक्रमअनुसार सरकारले कुनै बेरोजगार नागरिकलाई वर्षमा कम्तीमा सय दिन रोजगारी दिने प्रयास गर्नेछ।
दमकमा २ हजार बढि बेरोजगार, १ सय ७० लाई रोजगार
दमकमा कती छन् बेरोजगार ? यो सवालको जवाफ जो कोहिले सहजै दिन सक्दैन । आधाकारीक निकाय दमक नगरपालिकाले गत चैत महिनाभरी दमकमा कति बेरोजगार छन् भन्ने बारेमा तथ्याकंक संकलन गर्यो । बेरोजगार यूवालाई स्थानीय स्तरमै रोजगार दिने केन्द्रीय सरकारको कार्यक्रम कार्यान्वयान गराउन त्यस प्रकारका बिवरण संकलन गरिएको थियो । त्यसरी संकलन गरिएको तथ्याकंका आधारमा दमकमा २ हजार १ सय ५० जना बेरोजगारको सुचिमा सुचिकृत भएको तथ्याकं नगरपालिकाको रोजगार केन्द्रसँग छ । रोजगार संयोजक राजेन्द्र खनालका अनुसार दमकका १० वटैं वडाले पठाएको विवरणका आधारमा यो तथ्याकं प्राप्त भएको हो । तर के दमकमा यो संख्यामा मात्र बेरोजगार छन् त ? पूर्व नेपालको जीज्ञासामा रोजगार संयोजक खनालले भने सायद यो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको यो पहिलो वर्ष हो र धेरै यूवाहरुमा अन्यौलता भएका कारण पनि धरै बेरोजगार सुचिकृत हुन छुट् सकेका हुन्छन् । ’ उनले भने यो वर्ष छुटेकाहरु अव अर्को वर्ष सुचिकृत हुन सक्नेछन् र आफ्नो योग्यता र क्षमता अनुसारको रोजगार दिलाउन हामी समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नेछौ । दमकमा २ हजार १ सय ५० जना बेरोजगारहरु सुचिकृत भएपनि यस वर्ष भने नगरपालिकाले १ सय ७६ जनालाई मात्र रोजगार दिने भएको छ । कार्यक्रमको सुरुवाती चरण भएको र बिभिन्न रोजगारदाताहरु सुचिकृत भै नसकेको हुँदा सरकारकै तर्फबाट यो पटक १ सय ७६ जनालाई नगरपालिकाले रोजगार उपलब्ध गराउन लागेको नगरपालिकाले जनाएको छ । नगरपालिकाले १० वटै वडामा २÷२ लाखका दरले बजेट पठाईसकेको र कामको समेत टुङ्गो लगाईसकेकोले कार्यक्रम बिहिबारबाट सुरु हुने भएको हो । हरेक वडाले बृक्षारोपण,गमला व्यवस्थापन,सडक सरसफाई,ढल तथा नाला सफाई र विद्युत मर्मत सम्भारका लागी काम गराउनु पर्ने नगरपालिकाको रोजगार केन्द्रले जनाएको छ । बेरोजगारहरुको सुचीमा सुचिकृत भएका थोरै मात्र सिप र ज्ञान भएका अदक्ष कामदारलाई यस पटक रोजगार दिन लागीएको हो । यो अवधि ३० दिनको रहने र प्रत्येक दिन ५ सय १७ का दरले पारिश्रमिक दिईने व्यवस्था गरिएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागी दमक नगरपालिकामा संघिय सरकारले ससर्त अनुदान अन्तर्गत ३९ लाख रुपैँया पठाएको छ । त्यसमा न्यूनतम ७० प्रतिशत रकम मजदुर ज्यालामा खर्च गुर्न पर्ने छ भने बाँकी ३० प्रतिशत कामदारका लागी आवश्यक पोषाक, सामाग्री तथा अन्य व्यवस्थापनमा खर्च गर्नु प्रावधान रहेको छ । दमक नगरपालिकाले १ सय ७६ जनाका लागी आह्वान गरेको बेरोजगारलाई रोजगार कार्यक्रममा १ सय ७० जना मात्र काम गर्न इच्छुक भएर आएको नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशाषकीय अधिकृत दिनेश न्यौपानेले जानकारी दिए । जसअनुसार १ सय ७० जनालाई सरकारले तोकेको न्यूनतम ज्याला ५ सय १७ अनुसार न्यूनतम ज्यालामा प्रति दिन ८७ हजार ८ सय ९० रुपैँया (आयकर बाहेक) ३० दिन दिईने कामको ज्याला सोहि मुल्य अनुसार २६ लाख ३६ हजार ७ सय खर्च हुने देखीएको छ । बाँकी १२ लाख ६३ हजार ३ सय रुपैँया कामदारलाई आवश्यक पर्ने सामाग्री र कर्मचारी व्यवस्थापनमा खर्च गरिने रोजगार संयोजक खनालले बताए ।